Imoya iyanzela: I-Duchess yeCambridge iya kubamba ngoFebhuwari 14 ayiyithandi kakhulu
Khumbula ingoma uAla Borisovna Pugacheva "Ngaba bonke ookumkani bangakwazi"? Ngaloo nto, sithetha ngento yokuba abantu basebukhosini abahlali bevuyiswa ngabantu abanomdla ngokuqhelekileyo.
UKate Middleton, nangona akahlali kwisihlalo sobukhosi buka-Queen of Great Britain, kodwa unyanzelekile ukunyamezela ukuphazamiseka okuthile okuhambelana nesimo sakhe esikhethekileyo. Ngoko, uSuku lweValentine, ngoFebhuwari 14, iDuchess iya kuchitha le nyaka kude nomyeni wakhe othandekayo.
Inyaniso kukuba kulo nyaka umfazi weNkosana uWilliam wayenomdla ngokukhethekileyo. Ininzi yemisebenzi iindwendwe ezityelela zodwa.
Ngosuku lukaValentine, uceba ukutyelela okhethekileyo kwinqanaba lezempi elixhasiweyo. I-Royal Royal Air Force cadets yamema uMadrid Middleton kwisiganeko esisemthethweni esilungiselelwe ngoFebruwari 14. Kwimeko yesiganeko, ukuvulwa komzimba omtsha we-cadet kuya kubanjwa. Mhlawumbi uya kubuza, kodwa yintoni umfazi weNkosana uWilliam enokuyenza nayo? Inyaniso kukuba wanikwa ilungelo elihloniphekileyo - uMlawuli oyiNtloko yeeRoyal Cadets, -kukuqonda ukuba isikhundla siyafuna.
Umshicileli wachaza ukuba i-cadets yalungiselela inkqubo yokuzonwabisa yolonwabo kubo: ukubonakaliswa kwemiboniso kunye nethuba lokuzama isandla sabo kwi-simulator yendiza.
Iinkcukacha ezithandekayo kunye nezithombe zomtshato wePrince Harry kunye noMegan Markle!
Injongo ephambili yomlawuli
Ngethuba lokuvakatyezwa kwangoko ku-hospice, uNksz Middleton waphendula imibuzo evela kwizigulane ezincinane ezazifuna ukwazi ukuba kwakunjani ukuba yinkosikazi yangempela, kungekhona kwimbali yamagama. Utshakazi waseBrithani elizayo lithetha ukuba inkxalabo enkulu yenkwenkwezana kukunyamekela umyeni wakhe othandekayo nabantwana:
"Abantwana bahlala bezama ukubalekela kwindawo ethile. Kwaye kufuneka ndilandele ngokusondeleyo, kunzima kakhulu. Kule migudu, ubomi bomnyamakazikazi wanamhlanje ubhalwe. "
I-Tili-tiri intlama: Imfihlo uCarly Closs noJoshua Kushner babonisa iimvakalelo
UJohnny Depp wamangalisa umfanekiso omtsha kwi-premiere ye-detective detective
Wafa ngumculi waseBrithani owawuthandwayo, umlindi weBlack Black
Abantwana bakaCindy Crawford Kaya kunye noPeleyley Gerber beza kuqala kule podium
UDonald noMelania Trump ePuerto Rico: iimpahla ezisebenzayo kunye nokusabalalisa amathuwa ephepha
UBarack noMichelle Obama baye baba ngabavelisi
Iifoto eziqhelekileyo: UJamie Dornan kunye nomfazi wakhe nentombi ngokuhamba
UBlogger uChiara Ferranji wavuma ukuba uya kuba ngumama kungekudala
"Alive Ken" uRudrigo Alves uthetha ngemiphumo yokusebenza kwaye wabonisa isithombe phambi kokuba "utshintsho"
I-Dakota Johnson yahlukana nentombi kaMateyu Hitt
Isiboniso sokuqala saseMelania Trump sasigxeka
INkundla yaseKardashian ilungele iHalloween!
Brenton Thwaites kunye nentombi yakhe
UFarrell Williams nomkakhe balindele umntwana wesibini
Itafile ekhangekayo - iingcinga zekhitshi encinci
I-cardigan eyaziwayo kwisitayela seChanel
Yintoni enxiba ibhatyi ebomvu?
Ibhasiki kwi-lemonade kwi-multivariate
Umthendeleko woSuku - Ukulungela umtshato
Siyalulela iilethini ngezandla zethu
Ngaba i-Spice iya kubuya kwi-Spice Girls?
Yintoni enokuyinika intombazana ngoNyaka omtsha?
7 izikhephe ezivela kwikhabhinethi ka-Angelina Jolie kunye nosapho lwakhe
I-Toxicosis kwi-trimester yesithathu
I-Willow esuka kwiinwele
Ziziphi ukutya ezandisa i-hemoglobin?
Unyango lwe-pharyngitis engapheli kubantu abadala - iziyobisi
Izipho zokuqala zabantwana
Kutheni i-nettle incedo?
Amaziko angama-20 aqhelekanga emfundo
Izihlalo ezenziwe ngamatye